I-Inbuace yokutsala izityalo I-Xngtailong ishwankathela isiphene seemveliso zangaphambili kwaye siphucule ngokuqhubekayo. Inkcazo ye-Inbuace yokutsala izityalo
Igrafu ye-greyitite isetyenziswa ngokubanzi kwi-spelting yesixhobo se-ALTEY STELS, kunye ne-Affes yabo kwi-Metallsgy, ekuphoseni, oomatshini, kunye nemiphumo emihle yezoqoqosho kunye nezoqoqosho.
I-Linying xing tai ekhethekileyo ye-ceramic c., I-LTD inenkqubo epheleleyo yokulawula umgangatho.
1.Uyamkela ishishini le-OEM?
I-Dindelo lalingane linemveliso epheleleyo yemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya, kubandakanya umgca ozenzekelayo.
2.Ukuvumelana ukuba neqela lethu ukuba lifunde, uyilo, ukuvelisa kunye nokuthengisa.
I-3.Pilosophy: Ngomgangatho obalaseleyo, inkonzo yeklasi ye-Finde, ishishini elithembekileyo
Igrafu enqabileyo isebenza kakuhle kakhulu, yokonga amandla, ukukhuselwa kwendalo kwicandelo lemveliso yemizi-mveliso.
Ubushushu obuPhakamileyo buxhathisa igrafiki ebunjiweyo
C 99%, abanye abayi-1%
≥1.75-1.9G / CM3
I-cylindrical, SAGGER, sinokubonelela ngeemveliso ngokoMthengi&I-Rsquo; s Imizobo, iisampulu kunye nemfuno yokusebenza.
Malunga neentsuku ezisi-7-16 ngentlawulo
Umthamo wokunyibilika (kg)
Ezantsi i-OD (mm)
I-rairite yeringi ye-pire yokunyibilika
I-pieter ye-pire ye-pire inyibilikisi
1. Uzinzo oluhle lobushushu: ifomula ekhethekileyo ekujoliswe kukothusa ukufudumeza kunye nokupholisa imiqathango yokusetyenziswa kwegrafiti.
2. Ukunganyangeki kwengqondo elungileyo kunye nokusebenza kwempikiswano kunokuqinisekisa ukuthembeka komgangatho wemveliso.
3. Ukuchasana okuhle kwi-Acid eyomeleleyo kunye ne-alkali.
4. Ukuqhubela phambili kwe-hormal elungileyo kunokuba lincitshiswe kakhulu ixesha lokunyibilika kwaye lundise amandla.
5. Umxholo we-Ash yegrafitite ubulele ngaphantsi kwe-300PP, enokuqinisekisa ukuba isinyithi esixabisekileyo singenalo ukungcola ngexesha lokunyibilika.
Q3. Ngaba uvelise ngokuvumelana iisampulu?
A: Ewe, sinokuvelisa ziisampulu zakho okanye imizobo yezobugcisa. Sinako ukwakha jeli
Q4. Na ukuba nimlinge zonke iimpahla zakho phambi kokuba unikezelo?
A: Ewe, siye sibe 100% yovavanyo phambi kokuba unikezelo for 3times.
Q5. Emva kweNtengiso inkonzo
A: Ukuba ufumana naziphi iimveliso uzityhobozele mass ubungakanani, siya kuvelisa kwakhona okanye ukubuyekeza imali ngokungqalileyo yaye unikele isaphulelo ukuze elilandelayo.